Myanmar extends preventive measures against COVID-19 until May 15 | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar extends preventive measures against COVID-19 until May 15
Myanmar extends preventive measures against COVID-19 until May 15
Security officers spray water to clean the ground of Shawdagon pagoda, the country's landmark, due to the coronavirus disease (COVID-19) spread at Yangon, Myanmar, March 25, 2020. Myanmar reported its first coronavirus death on Tuesday,a69-year-old man who also had cancer and died inahospital in the commercial capital of Yangon. (REUTERS/Stringer)
စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက် (၁၅)ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်
Covid-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဗဟိုကော်မတီ၏ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ဧပြီ(၃၀)မှ မေလ(၁၅)ရက်အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ပေါ်၌မည့်သည်နိုင်ငံမှ Covid-19ရောဂါအပြီးသတ်နိုင်ပြီဟု မပြောနိုင်သေးဘဲ အချို့နိုင်ငံများတွင် အဆိုပါရောဂါ၏ ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ် ပြန်လည်စတင်လာပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက ပြောကြားထားသည်။
ယင်းအတွက် ပြည်သူများအနေဖြင့် စိတ်မောပန်းမသွားကြရန်နှင့် ခံနိုင်ရည်အားမွေးထားရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပြီး အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို မျှော်လင့်ပြီး အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြောဆိုထားသည်။
နိုင်ငံတွင်း ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီ(၂၄)မနက်ပိုင်းအထိ Covid-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ(၁၃၉)ဦးရှိပြီး ယင်းထဲမှ သေဆုံးသူ(၅)ဦး၊ ရောဂါပြန်လည်သက်သာ၍ ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ(၉)ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
Daw Aung San Suu Kyi, the State Counsellor of Myanmar, announced on her Facebook Page that the country will extend the period of preventive measures to May 15 from April 30 meaning all the directives and rules issued by the National-Level Central Committee on Prevention, Control and Treatment of COVID-19 will remain effective until May 15.
There is no country to announce that the spread COVID-19 has been put into end while some countries are facing second wave of the spread, her Facebook post continued.
Thus, people need to stay strong, she encouraged, and hope for the best while preparing for the worst.
Myanmar has found 139 confirmed cases as of April 24 morning, just overamonth it found the first case. Unfortunately,5of the Covid-19 deceased while nine patients has recovered and been discharged from hospital.
Previous articleMystery of India’s lower death rates seems to defy coronavirus trend
Next articleCHID delays repayment for its home loan